Art/Poems – Page2– Trend.com.mm
နန်းတွင်းကားတွေထဲမှာ ပုံမှန်သရုပ်ဆောင်နေကြ မင်းသား၊မင်းသမီးတွေမဟုတ်ပဲ K-pop Idols တွေကို ထည့်သွင်း ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ အတော်လေးကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းမှာပါနော်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on K-Dramas ရဲ့နန်းတွင်းဇာတ်ကောင်နေရာတွေမှာ အလိုက်ဖက်ဆုံး K-pop Idols များ
အနုပညာရှင်တွေကို တရားလွန်စွဲလန်းရာကနေ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုပါ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ချင်တဲ့သူတွေကိုတော့ ကိုရီးယားအနုပညာလောကမှာ Sasaeng Fan အစွန်းရောက်ပရိတ်သတ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီလို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on အစွန်းရောက် fan တွေရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး အန္တရာယ်ပေးမှုများ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ ရုပ်ရည်ချောမောသလို အသံ Vocal ကောင်းကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်တွေကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ 1. » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ရုပ်ရည်ချောမောပြီး အသံ vocal ကောင်းတဲ့ K-Oppa များ
အရပ် ၆ ပေကျော်တဲ့ အိုးပါးကို crush ကြမယ်
မော်ဒယ်နှင့် သရုပ်ဆောင် Kim Woo- bin လို့လူသိများတဲ့ Kim Hyun-joong ကိုတော့ ၁၉၈၉ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on အရပ် ၆ ပေကျော်တဲ့ အိုးပါးကို crush ကြမယ်
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အောင်မြင်ဆုံးK-pop အဖွဲ့တွေထဲမှာ Blackpink အဖွဲ့ဟာဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေအထိပါကျော်ကြားနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။အဖွဲ့ရဲ့အငယ်ဆုံးလေး Lisa လို့ ခေါ်ကြတဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on Blackpink ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Lisa တစ်ယောက်ထိုင်းစကားမေ့သွားတဲ့အခါ
အခုပြောပြမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကတော့ ရိုက်ကူးရေး ရိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့တာကြောင့် ရိုက်ကူးရေးကို ရပ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါ။ 1. Chimera ဒီဇာတ်ကားကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on မျှော်လင့်မထားမိခဲ့တဲ့ အခြေအနေကြောင့် ရိုက်ကူးရေးရပ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့ K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲများ
ကိုယ်ရဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုစိတ်ပျက်စေတဲ့အချက်တွေထဲ ဒီအချက်လေးတွေလဲပါပါတယ်နော်။ ၁။ မကြာခဏဖုန်းဆက်တာ ချစ်သူဖြစ်ခါစအချိန်မှာ တစ်ယောက်အသံတစ်ယောက်ကြားရတာ ကြည်နူးစရာအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ယောက်ျားလေးတွေအထင်သေးသွားနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့အပြုအမူများ
မြို့တော်ဝန်ကြီး သမီး ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားတဲ့အချိန်က အခုအထိဆို ၇ နာရီကျော်နေပါပြီ။ မြို့တော်ဝန်ကြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတယ်လို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန်ကြီးရဲ့ အလောင်းပြန်တွေ့
တကယ်တော့ K-pop Idols တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်လဲ စိန်ခေါ်မှုများစွာနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တော်တော်များများက နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ပြီးမှ ပွဲဦးထွက်ခဲ့သူတွေလဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီး အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေကြသူများ
Posted on July 8, 2020 by Mya Thet
ဒီနေ့မှာ Photo ကို Edit မလုပ်ဘဲနဲ့တောင်မှ လှရက်နိုင်လွန်းတဲ့ ဆယ်လီမမတွေကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ 1. Rosé » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on Photo Edit မလုပ်ဘဲနဲ့တောင် လှရက်လွန်းသူကြီးတွေ